Taliyaha ciidanka booliska oo aqoon isweydaarsi uu soo xiray saraakiil boolis,Sawirada | SPF: Welcome to the Somali Police
Taliyaha ciidanka booliska oo aqoon isweydaarsi uu soo xiray saraakiil boolis,Sawirada	Added by admin on 29 September 2015.Saved under WAX-QABADKA	Taliyaha ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa maanta Muqdisho ugu soo gabo gabeeyay saraakiil ka socotay maamul goboleedyada dalka aqoon isweedaarsi ku saabsan doorka booliska ee wada shaqeynta Dowladda Federaalka ah iyo Maamulada Dalka.
Aqoon isweedaarsi ku saabsan doorka booliska ee Federaalka iyo wada shaqeynta dhinaca ammaanka oo 27-kii bishan ka furmay Muqdisho ayaa looga hadlay sida lagu xoojin karo wada shaqeynta ka dhexeyso saraakiisha ciidanka booliska kuwa Maamul goboleedyada iyo saraakiisha kale ee dowladda Federaalka ah, iyadoo Taliyaha Booliska Soomaaliya iyo taliyayaasha Maamul goboleedyada Dalka ay isla soo hadal qaadeen hanaanka ugu wanaagsan oo ay u wada shaqeyn karaan Booliska heer maamul ilaa iyo heer Qaran.
Taliyaha Booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xassan Xaamud ayaa tilmaamay in aqoon isweydaarsigan uu yahay mid lagu xoojinayo wada shaqeynta ciidanka booliska meelkasta oo ay ka howlgalaan.
“Waxaa Sharaf noo ahayd in aan isugu yeerno saraakiishaan, waa markii labaad ee aan kulano hadda waa is tusnay hanaanka aan u wada shaqeyn karno boolis ahaan, maadaama uu wadanka u gudbayo nidaamka federaalka ah, waana isla fahanay sidii arrimahaasi loo xoojin lahaa.”ayuu yiri Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud.
Taliyaha ayaa sheegay in rajo wanaagsan ay ka qabaan sidii loo dhaqan gelin lahaa waxyaabihii aqoon isweydaarsiga la isku dhaafsaday, ayna joogteyn doonaan kulamada nuucaani oo kale ah ee lagu xoojinayo wada shaqeynta ciidanka booliska heer Maamul goboleed iyo mid federal.